JanakpurToday- No.1 News Paper From Madhesh Nepal, Political News,Natioal,International, Entertainment,Business,Local News, Janakpur News,Science & Technology, Agriculture,Economic,Interview, Thought
उस्तै हुन मधेश र डा केसीका मांग
पौष २९, २०७५
उहिले मल्लकालमा पाटन राज्यका शासक वनेका छ प्रधानले जनतालाई धुरुक्क रुवाएका थिए रे । इतिहासमा लेखेको कुरा हो । अहिले पनि, सरकारका कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले ओलीले उप–प्रधानमन्त्रीहरुलाईदेश व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएका छन । संविधान जारीमात्रै भएको छ । पूरै लागू भएको छैन ।
शान्तिपूर्ण हिसावले नेपालको शासन चलाउन धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन । काठमाडौं उपत्यका केन्द्रीत सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारीहरुलाई निर्वाध चलाइ दिएपुग्छ । नेपाली जाति गतिमा विश्वास गर्दछन । तेल भनेको गति हो । अहिलेको समयमा यो सत्य स्थापित भै सकेको छ । वजारमा अभाव र महंगीको साम्राज्य छ । तर, सरकार भने सारा खुदाइ एकतरफ, जोरुका भाइ एकतरफ भने जस्तै नयाँ नयाँ सवारीको खरीद, पेट्रोलको सहज उपलव्धि र यस्तै यस्तै सुविधा जुटाउन ज्यान फालेर लागेको छ । तस्कर र कालावजारियालाई कुनै पिरलो छैन ।बिकास र समृध्दिको यात्रा घाँटीसम्म आइ सकेको छ, घाँटीबाट तल ओर्लिन मात्रै बाँकी छ । खल्तीमा पैसा हुनुपर्छ बजारमा सवै कुरो तमतयार भेटिन्छ । काठमाडौंमा आगो लाग्यो भने पूरै देश सल्किन्छ भन्ने सनातन देखिको शासकीय मान्यता पूरै क्रियाशील छ । अन्ततिर जे सुकै होस, काठमाडौंको साम्राज्य सुरक्षित हुनु पर्दछ । कुरा यतिमात्रै हो ।मध्यप्रदेश र राजस्थानको चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको कारुणिक पराजयपछि काठमाडौं उपत्यकामा अटेश–मटेश गाडी चल्ने स्पष्ट संकेत आएको छ । देशका प्रतिष्ठित समाचारपत्रहरुलेसम्पादकीय लेखेरअब आपूर्ति व्यवस्था कहिल्यै नबिग्रिने, सँधै सहज बन्नेर नाकाबन्दी नहुने हिसावले नेपाल भारत सम्बन्धको बिकास भएको वताएका छन । यो देश समस्या सल्टिने बाटोमा लागेको छ । यसका संकेत आइ सकेका छन। यो संकेत सवभन्दा पहिले वुझेका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले । उनले आत्मनिर्भरताको नारा लगाउने वित्तिकै आएको थियो, नाकाजाम खुकुलोहुने संकेत । अहिले राष्ट्रिय एकता दिवसका दिन, सिंहदरबार अगाडि ठडिएको पृथ्वी नारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पणगर्न महामहिम राष्ट्रपतिकोसवारी भएको छ । यसलाई नेपाली जनताले राष्ट्रवादको विजयका रुपमा लिएको बिश्वास सरकारले लिएकोछ । केही समयअघि भएको अघोषित नाकाजामबाट भारतले के उपलव्धि हासिल गर्यो त्यसको लेखाजोखागर्ने काम उनीहरुकै परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थात साउथ व्लक, का हाकिमहरुको हो । हामीले गाएको “यो मन त नेपाली हो” गीत जस्तै भारतीय हाकिमहरुको मन पनि भारतीय नै हो । सोनिया हुन कि मोदी हुन, दुवैका लागि नाकाजामनेपालका बिरुध्द बेला बेलामा प्रयोगहुने शक्तिशाली हतियार हो । नेपाली राज्यको केन्द्रका रुपमा रहेको काठमाडौंलाई कडा राजनीतिक दवावदिन उतिवेला नाका कुरेर वसेका संयुक्त मधेशी मोर्चाका नेताहरु कोही संसदमा, कोही सरकारमा, कोही प्रदेश सभामा र कोही प्रदेश सरकारमा फर्किएका छन । भारतको अघोषित नाकाजाम नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको भोलिपल्टैबाट शुरु भएपनि मधेशको आन्दोलन संविधान वनाउन लागेका चार दलका नेताहरुले संघीय सीमाका रेखा कोरेदेखि शुरु भएको थियो । संविधानको नाममा चार दर्जन आन्दोलनकारी र दर्जन सुरक्षाकर्र्मीको नरवली चढाएपछि आन्दोलन उत्तेजक वन्नु अस्वाभाविक थिएन । नेपालका मधेशीले शुरु गरे, भारतले त्यसको उपयोग गर्न खोज्यो । कुरा यत्ति नै थियो ।तर, देखिएको यत्ति नै कुराले नेपालका मधेशी र पहाडी दुवै समाजमा संशय बढेको छ । सबैको मुटु हल्लाइ दिएको छ । तै, यो घटनाले नेपालको सामाजिक र राजनीतिक विखण्डन चाहनेहरु वातावरण दूषित वनाउन सफल भएनन । मधेशको आन्दोलन नेपालकोे अखण्डताका विरुध्द हो भन्ने गलत सन्देश फैलाउन सरकार आफैं सक्रिय रहेको थियो । यो सन्देशसंग असहमत पक्षलाई देशद्रोही र गद्दारको श्रेणीमा राखियो ।लोकतन्त्रमा आफना जायज मांगहरुका लागि आन्दोलनगर्ने जनताको अधिकार हो । तर, मधेशका जनताले त्यो अधिकारको प्रयोगगर्दा आन्दोलनकारीहरुलाई नैतिक समर्थन दिनुको सट्टा उनिहरुप्रति उत्तेजक र शत्रुवत व्यवहारगर्नु कहाँको न्याय थियो ? कसैले व्याख्या गरेन । आफनै देशका आपूm सरहका देशवासीको राष्ट्रियतामा शंकागर्ने यो कस्तो व्यवहार थियो ? निश्चय पनि, साँच्चै नेपाली मनको कुनैपनि नेपालीले यस्तो अशोभनीय र विभाजनकारी प्रतिक्रिया दिन सक्दैन । देश जति पहाडियाकोे हो, त्यति नै मधेशीको पनि हो, हिमालीको पनि हो । लिम्वू, राई, मगर, गुरुङ सवैको समान अधिकार छ नेपालको सार्वभौम माथि । सत्तामाथि मात्रै अगाध निष्ठाराख्दै आएका राजनीतिक दलका नेताहरुले देश र जनता विर्सिनु असामान्य विषय भएन ।कोइराला गए, ओली आए । त्यसपछि प्रचण्ड आए, देउवा आए । चुनावमा ओली र प्रचण्ड मिलेर आए । चुनाव सकिएपछि जुटेर आए । दुइ तिहाईको सरकार बनाए । तर, मधेशलाई हेर्ने केन्द्रिय दृष्टिकोण वदलिएन, अझै आक्रामक भयो । सत्ता समीकरणका संयोजकका हैसियतले ओली सरकारको राजनीतिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, मधेशीलाई सवैभन्दा वढी अधिकार दिएका छौं हामीले । कसैले उनलाई यो सोधेन, जनतालाई अधिकारदिने उनीहरु को हुन ? के संविधान–सभा उनीहरुको पर्याय थियो ? हो, सभाको अस्तित्व स्वतन्त्र भएपनि सवै व्यवहारिक हिसावले सभा चार दलका नेताहरुको विर्ता नै थियो । सभासदहरुको स्वतन्त्रता कुण्ठित थियो । अझ भनौं, सभासदहरुले आफनो स्वतन्त्रताको साँचो चार दलका नेतालाई वुझाएका थिए ।ओली उहिले नै प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे । वैशाख १२ को भुईंचालोपछि उनले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको भए र त्यसमा कांग्रेसको पनि समर्थन जुटाउन सकिएको भए अहिलेसम्म समृध्दि भित्रिइ सकेको हुन्थ्यो । अहिले उनी प्रधानमन्त्री छन । भुईंचालो पीडितहरुको नाममा दुइ बर्ष अघि नै आएको अरवौं अमेरिकी डलर उनको कव्जामा छ । यो बर्षपनि जाडो शुरु भै सकेको छ । पुनःनिर्माणको प्रक्रिया सबैतिर प्रभावकारी भएको छैन । प्रक्रियाको बाटोमा पर्नेसरकारी काम पनि ठप्प छ । उहिले मल्लकालमा पाटन राज्यका शासक वनेका छ प्रधानले जनतालाई धुरुक्क रुवाएका थिए रे । इतिहासमा लेखेको कुरा हो । अहिले पनि, सरकारका कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले ओलीले उप–प्रधानमन्त्रीहरुलाईदेश व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएका छन । संविधान जारीमात्रै भएको छ । पूरै लागू भएको छैन । सरकार र मधेशी मोर्चावीच वार्ता सँधै जारी छ । विगत चुनावमा जितेका सांसद चौधरी एकजनाले शपथ लिएका छन । अरु लडेको लडेकै छन । मोेर्चाका नेताहरु संसदमा फर्किएका छन । संसदमा फर्किएर मधेशका नेताहरुले सदाशय प्रकट गरेका छन । सरकारले कुरा सुनेन भने उनीहरु जताततैस्थानीय विकास कार्यालयका रुपमा खडा भएका स्थानीय निकायको कार्यालय अगाडि धर्ना बस्ने छन । स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि डा गोविन्द केसी बर्षौंदेखि निरन्तर अनसन बस्दै आएका छन । उनका मांग र मधेशीका मांग उस्तै छन जो कहिल्यै पूरा हुने लक्षण देखिदैन ।